Kyawt K Khine's Page - Myanmar Network
Kyawt K Khine
Kyawt K Khine's Likes
Kyawt K Khine's Friends
Kyawt K Khine's Discussions
Started this discussion. Last reply by Nilar Jul 22, 2015. 22 Replies 53 Likes
[Zawgyi]လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ အဆင်ဆင်ပြေပြေနေနိုင် ဖို့ကလည်း အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ်မှာ လေးဆယ့် ရှစ်နာရီလောက်က ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင် ဖက်တွေနဲ့ အတူဖြတ်သန်းရတဲ့ အချိန် တွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ…Continue
Started this discussion. Last reply by Moekaung Soemyat Jul 23, 2015. 18 Replies 65 Likes
“ရိုးသားမှုက အကောင်းဆုံး မူဝါဒ ဖြစ်တယ်” အဲဒီဆိုရိုးစကားရှိနေပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကိုယ့်စိတ်ထဲရှိတဲ့စကား တွေ၊ အယူအဆတွေ၊ အတွေးအမြင်တွေ ကို အမှန်အတိုင်း ထုတ်မပြောသင့်တဲ့ အချိန်အခါလည်း ရှိပါတယ်။ အမှန် အတိုင်းပြောလို့ ရွာပြင်ထွက်နေရတယ်ဆို တဲ့ စကားလည်း…Continue
Started this discussion. Last reply by pwintphyu Jul 1, 2015. 16 Replies 50 Likes
လုပ်ငန်းခွင်မှာ လစာအနေနဲ့ရော၊ အလုပ်အကိုင်အပိုင်းမှာပါ အဆင်ပြေနေ တဲ့ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ လက်ရှိ အလုပ်က ထွက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ် ခုတည်ထောင်မယ်ဆိုတာ တကယ့်ကို ကြီး မားတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ အောင်မြင်နေ တဲ့ ၀န်ထမ်းဘ၀ကိုစွန့်လွှတ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်…Continue
Started this discussion. Last reply by aungkhinemoe Jul 14, 2015.7Replies 24 Likes
ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ အလုပ် က ထွက်သင့်သလဲ။ အလုပ်ကထွက်ဖို့ ယေဘုယျအားဖြင့် အခြေအနေနှစ်မျိုးရှိ ပါတယ်။ ပထမအခြေအနေကတော့ တစ် ခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုက ဒီအလုပ်မှာထက် ကောင်းတဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ၊ ခံစားခွင့် တွေ ကမ်းလှမ်းခံရလို့ လက်ရှိအလုပ်က ထွက်တာပါ။ ဒုတိယအခြေအနေကတော့…Continue
Started this discussion. Last reply by paingsoe htun Jul 3, 2015.7Replies 33 Likes
အလုပ်ရှာနေကြတဲ့ တချို့လူငယ် တွေ မကြာမကြာကြားရတတ်တာက အလုပ်ရှာရခက်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပါ ပဲ။ အလုပ်တွေကလည်း ခေါ်ယူနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်မရကြဘူး။ အဲဒီကြားထဲက ကွာဟချက်က ဘာဖြစ်မလဲ။ ဒီကြားထဲက လိုအပ်ချက်တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ။ သင် က အလုပ်ရှာဖွေနေတဲ့ လူတစ်ယောက်…Continue
Started this discussion. Last reply by Wittyie Mon Jul 28, 2015.6Replies 34 Likes
ဘယ်အရာတွေက လုပ်ငန်းခွင်အ တွင်းမှာ ကိုယ့်ကို စိတ်ဒုက္ခပေးနိုင်သလဲ။ လုပ်ငန်းမအောင်မြင်တာ၊ စိတ်ဖိစီးတာ၊ ညံ့ဖျင်းတဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာ လုပ်ကိုင် နေရတာစတာတွေအပြင် လုပ်ငန်းခွင်အ တွင်းမှာ တချို့လူတွေကြောင့်လည်း စိတ် ညစ်ရစေပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲ…Continue
ခေါင်းဆောင်နဲ့ သူဌေး ခြားနားချက်
Started this discussion. Last reply by wai phyo May 15, 2016.5Replies 27 Likes
အလုပ်မှာ ကိုယ့်ရဲ့အကြီးအကဲက ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်လား၊ သူဌေး တစ်ယောက်လားဆိုတာ အခုဖော်ပြမယ့် အချက်တွေက ခွဲခြားပေးပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်က ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဆိုရင် ကိုယ့် မှာ ဘယ်လိုအကြီးအကဲမျိုးရှိနေသလဲ။ ခေါင်းဆောင်နဲ့တူတဲ့ အကြီးအကဲလား၊ ဒါမှမဟုတ် သူဌေးနဲ့တူတဲ့…Continue
Started this discussion. Last reply by Aye Myat Mu Aug 29, 2015.5Replies 26 Likes
လူတိုင်းကိုယ်စီမှာ မျှော်လင့်ချက် ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်မှုပေး နေတဲ့ စိတ်ဓာတ်တက်ြွကစရာ ရည်မှန်း ချက် တစ်ခုခုပဲဖြစ်ဖြစ် ရှိနေတတ်ကြ ပါတယ်။ အဲဒါက ဘ၀နေထိုင်မှုအတွက် ရည်မှန်းချက် တစ်ခုခုဖြစ်နိုင်သလို၊ ငွေကြေးဥစ္စာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ စီးပွားရေး၊…Continue
Started this discussion. Last reply by Khin Hnin Thet Aug 15, 2015.5Replies 31 Likes
ကိုယ့်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် က ခေါင်းဆောင်ကောင်းပီသတဲ့သူလား၊ မပီသတဲ့သူလားဆိုတာ ဒီအချက်တွေက ပြောပြပါလိမ့်မယ်။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေမှာရှိတဲ့ အရည် အချင်းတွေ၊ စွမ်းရည်တွေကို ဖော်ပြပေး သွားပါမယ်။ သင့်မှာ ခေါင်းဆောင်ကောင်း ရှိသလား။…Continue
Started this discussion. Last reply by Kyawt K Khine Dec 14, 2017.2Replies3Likes
[Zawgyi]ကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီမှာ၊ အဖွဲ့အစည်းမှာ ဝန်ထမ်းမြဲအောင် ဘယ်လိုဆွဲဆောင်ကြပါ သလဲ။ ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး ရှိကြပါလိမ့်မယ်။ ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ အဓိကအချက်ကိုဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ Comfort Zone (သက်သောင့်သက်သာ…Continue
Kyawt K Khine has not received any gifts yet
Kyawt K Khine's Page
At 14:30 on April 27, 2018, KYAW MOE MYINT said…
At 14:19 on September 20, 2016, KYAW MOE MYINT said…
At 14:55 on August 17, 2016, Thiha Bo Bo said…
At 17:12 on March 16, 2016, waimyooo said…
hello....fri ..... Nice to meet you
At 21:36 on February 3, 2016, Win Zaw Thu said…
hello i am ver nice . by the way
can you teach me how do it and
At 16:35 on September 25, 2015, Chaw Su Aung said…
" Mingalar Par". I'm Chaw Su. Can I friend with you.
At 11:51 on September 17, 2015, Mr.Thet Aung said…
hello nice too meet y
At 11:27 on July 11, 2015, aungkhinemoe said…
I would like to askedaquestion which is how to start learning the english language.I can writealittle but cannot speak quickly and also cannot understand what they are talking and so can you advice me.
Aung Khine Moe
At 12:13 on July 2, 2015, myo kyawswar said…
At 14:34 on June 30, 2015,